जनता आवासमा उर्लाबारी र मिक्लाजुङमा १० वटा घर निर्माण हुने - 761खबर.com
जनता आवासमा उर्लाबारी र मिक्लाजुङमा १० वटा घर निर्माण हुने
उर्लाबारी । जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत मोरङ क्षेत्र नं. १ को उर्लाबारी र मिक्लाजुङमा १० वटा घर निर्माण हुने भएको छ ।
बिहीबार मोरङ क्षेत्र नं. १ का प्रदेश सांसद कुलप्रसाद साम्बा लिम्बू (कुशल) को अध्यक्षतामा विराटनगरमा भएको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । उर्लाबारी–८ को सन्थाल बस्तीमा ५ घर निर्माण गरिने छ भने मिक्लाजुङमा ५ घर निर्माण हुनेछ ।
मिक्लाजुङ–२ मा १, मिक्लाजुङ–३ मा १, मिक्लाजुङ–५ मा १ र मिक्लाजुङ–६ मा २ घर निर्माण गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सांसद लिम्बूले जानकारी दिए । प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएको जनता आवास कार्यक्रम कार्वान्वय कार्यविधी २०७५ को दफा ४ को उपदफा १ सँग सम्बन्धित लाभग्राही छनौटका आधारमा तयार गरिएको जनाइएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङका संयोजक नरेश पोख्रेल, उर्लाबारी नगरपालिकाका नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भूप्रसाद भट्टराई, मिक्लाजुङका प्रशासकीय अधिकृत प्रमोदकुमार चौधरीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।